अदालतप्रति विश्वास छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ : डा. मिनेन्द्र रिजाल « News24 : Premium News Channel
अदालतप्रति विश्वास छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ : डा. मिनेन्द्र रिजाल
बुटवल, १८ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारप्रति पूर्ण भरोसा रहेको भन्दै अदालतले संविधानत काम गर्ने र संसद पुनर्स्थापना गरेरै छोड्ने बताउनुभएकाे छ ।
बुटवलमा आइतबार भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले सरकारले चुनाव गराउन नभई सत्ता लम्वाउनका लागि मात्र मिति घोषणा गरेको दावी गर्नुभयाे । ‘यो सरकार निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेको होइन् । प्रतिनिधिसभा नरहेपछि सत्ता लम्बिन्छ भन्ने सोचले चुनावी घोषणको बहाना मात्रै हो ,’ उहाँले भन्नुभयाे । नरहे बासँ नरहे बसुरी’को संज्ञा दिदै ओली सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयाे ।
उहाँले सवोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेकाे बताउनुभयाे । नेता रजालले संविधानको मर्म अनुरुपको व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे । विगतको प्रतिकुल अवस्थामा पनि अदालतले सहि निणर्य लिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा पनि सोही बमोजिम आदालतको गरिमा कायम गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे – ‘पंचायतकाल होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको पाला होस अदालतले सही निणर्य गरेको छ । राजनीतिक दलको भन्दा अदालतको इतिहास राम्रो छ । तसर्थ पुनस्थापना हुन्छ ।’
उहाँले अब ओलीको ज्ञानेन्द्रजस्तै बिदा हुने दिन आउने बताउनुभयाे । सत्तामा आएपछि नियम कानून केही नमान्नेहरु इतिहासमा कहिल्यै लामो समय नटिकेको उहाँकाे दाबी छ । संविधान ठिक ठाँउमा भएपछि मात्रै चुनावमा जाने उहाँको भनाई छ ।
लामो समयको त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस सडकमा आएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको असवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म कांग्रेसको निरन्तर विरोध गरिरहने उहाँको भनाई छ ।